Handkerchief Vagadziri & Vatengesi - China Handkerchief Factory
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Ladies Hedhendi 513500
Hot-kutengesa Handkerchief (Inonhuhwirira uye ichifashukira) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakagadzirwa katatu-hukuru kusona, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513501
Hot-kutengesa Handkerchief (Pattern brocade blue) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513502
Hot-kutengesa Handkerchief (Pattern brocade pink) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513503
Hot-kutengesa Handkerchief (Pattern brocade green) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513505
Hot-kutengesa Handkerchief (chrysanthemum) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko ruite kuratidza manzwiro ako. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Henduru Yakavezwa Yakarukwa Square Hanky ​​Ladies Hedhendi 513506
Hot-kutengesa Handkerchief (Bud izere nematavi) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakagadzirwa nematatu-emhando yekushongedza, rega ruoko riite kuratidza ako manzwiro. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513507
Hot-kutengesa Handkerchief (Tsvuku yemepuru shizha) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakaitwa matatu-mativi machira, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513508
Hot-kutengesa Handkerchief (Yero maple shizha) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakaitwa matatu-mativi machira, rega ruoko riite kuratidza ako manzwiro. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Vakadzi Mechechechefu 513509
Hot-kutengesa Handkerchief (Plum ruva) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Ladies Hedhendi 513510
Hot-kutengesa Handkerchief (Flower cluster) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa nemativi matatu-mativi, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
Yakakwira mhando Hekichefu Yakarukwa Yakashongedzwa Square Hanky ​​Ladies Hedhendi 513511